date_range 17 March 2017
Google Assistant ကို Android Marshmallow နဲ့ Nougat သုံး စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ထုတ်ပေးနေပြီ ဆိုတာ သိကြမှာပါ။
ကျနော်တို့ TechX Myanmar မှာ ရေးသားထားတဲ့ Comments တွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Xiaomi Mi 5, OnePlus 3T နဲ့ Sony Xperia XZ ဖုန်းတွေမှာ ရနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ (Google Assistant ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာတွေ အသုံးဝင်လဲဆိုတာ သိချင်ရင် ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
ဒီမှာ တစ်ခုထူးခြားတာက Google Assistant ရပြီဆိုတာတွေအကုန်လုံးက Android စမတ်ဖုန်းတွေချည်းပဲဖြစ်ပြီး၊ Android tablet တွေမှာတော့ ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ခုတစ်လေမှ မကြားမိပါဘူး။
Assistant ရပြီလို့ Google ကြေငြာတုန်းက Official Blog Post မှာလည်း "Android smartphones", "smartphones", "Android partner phones" စတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေပဲ သုံးထားတာကို အခုမှ ပြန်သတိထားမိပါတယ်။ Assistant ရပြီဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် အရမ်း Hype (မွှန်ထူ) နေတဲ့ ကျနော်တို့ မျက်စိလျှမ်းသွားတာပါ။
ဒါပေမယ့် တက်ဘလက်တွေမှာကော Assistant ရပြီလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေကို Google ကိုယ်တိုင်က မနေ့ကပဲ ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါပြီ။
Google ရဲ့ ဖြေကြားချက်
Android Police သတင်းဌာနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကို Google က အတည်ပြုဖြေကြားချက်အရ Assistant ကို လောလောဆည် Android ဖုန်းတွေအတွက်ပဲ ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး၊ တက်ဘလက်တွေမှာတော့ ရဦးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
“ Assistant ကို Google Play Services ရှိတဲ့ Android Marshmallow နဲ့ Nougat ဖုန်းတွေမှာ ရမှာပါ။ တက်ဘလက်တွေတော့ မပါဝင်ပါဘူး"
လို့ ကုမ္ပဏီက အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတိုင်းဆို Tablet အတွက် Assistant ထုတ်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ကော ရှိရဲ့လားတောင် မသိပါဘူး။ တက်ဘလက်မှာ မကြာခင် (ဒါမှမဟုတ်) တစ်ချိန်ချိန်ရမှာပါဆိုတဲ့ စကားလေးတောင် မသုံးသွားတာကြည့်ရင် မျှော်လင့်ချက်ကတော့ ခပ်ပါးပါးပါပဲ။
Android OS ချင်းအတူတူ Tablet တွေမှာ ဘာလို့မရတာလဲ?
ဘာလို့ တက်ဘလက်တွေမှာ Assistant မရတာလဲဆိုတာကိုတော့ Google က ထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ၊ ဖြစ်နိုင်တာက ဖုန်းတွေထက် ပိုကြီးတဲ့ Table စခရင်တွေအတွက် မတူညီတဲ့ Interface ကို ပြင်ဆင်နေတာလို့ ဖြေသိမ့်တွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းတွေမှာ အခုရနေတဲ့ Google Assistant က အရင်ကတည်းကပါတဲ့ Now On Tap နဲ့ ဘာမှမကွာတာကြောင့် တက်ဘလက်အတွက် Interface သက်သက်လုပ်နေတာကလည်း သိပ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
တစ်ချိန်မှာကော Tablet တွေမှာ ရနိုင်မလား?
စိတ်မကောင်းစွာပဲ ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေကိုတော့ Google က ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Android OS ချင်းအတူတူတောင် Tablet မှာ မရဘူးဆိုတာကတော့ သိပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Tablet အတွက် Optimize လုပ်နေလို့ ကြာနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ Android tablet ကိုင်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် လောလောဆည် Home ခလုတ်ကို ဖိပြီး၊ Assistant ကို ခဏခဏ ရှာမနေပါနဲ့ဦး။ ရပြီလို့ သတင်းသိရတာနဲ့ ကျနော်တို့ တင်ဆက်ပေးပါမယ်။
The Verge Android Police
Features Google Google Assistant Android Artificial Intelligence Digital Assistant Smartphones Tablet Android Nougat Intelligent Digital Assistant Android Marshmallow Virtual Assistant Android Tablet Android Smartphones